Ugu Weyn Ee Hay
Tiknoolojiyada beeraha Alfalfa
Alfalfa waa dhir daawo ah oo ka soo jeeda qoyska. Alfalfa waa la koray si ay u quudiso xayawaanka loogu talagalay ujeedooyin daaweyn iyo gastronomic ah. Sida loo abuuro alfalfa Alfalfa lagu beeray guga hore, marka dhulka ayaa si fiican u qoyan, sidaa darteed abuur ah ma dhintaan. Taariikhaha gaarka ah ee loogu talagalay beeridda alfalfa waxay ku xiran tahay cimilada aagga, badanaa bisha Abriil.
Waa maxay baahida loo qabo mulching ee ciidda, gaar ahaan codsiga agrotechnical soo dhaweynta
In geedi socodka beerta beerta iyo beeraha waa muhiim in la ilaaliyo dhirta laga bilaabo dhibaatooyin dabiici ah. Waxay ka caawisaa arrintan, gaar ahaan mulch - lakabka wax lagu daboolayo dusha dhulka ku dhow khudaarta sii kordhaysa iyo qaraha, duurka berrito, geedo midho leh ama ubax.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Hay 2020